Kandidà 21 : Hizotra amin’ny lalan-kafa -
AccueilSongandinaKandidà 21 : Hizotra amin’ny lalan-kafa
Taorian’ ny amboletra tamin’ ny fanatanterahana ny fifidianana ny 7 novambra 2018 izao, dia mitsiry ny hevitra, ary tonga hatramin’ny fifanantonan’ ireo samy mpanao politika. Tahaka izany ny nataon’ny fivondronan’ireo kandidà 21, izay mbola mitady hevitra taorian’ny fahataperan’ny 24 ora, nomen’izy ireo hanokafana ny lisi-pifidianana sy hanarenana ny fanomanana. Ireto kandidà ireto, izay somary nangina omaly, ary tsy nanatanteraka hetsika niarahana. Araka ny fantatra anefa dia nisy ny fivoriana izay niarahan’ireo kandidà 21 ireo, teny amin’ ny trano fonenan’ny Amiraly Didier Ratsiraka teny Faravohitra. Hatreto, mbola tsy fantatra mazava ny tapaka, satria najanon’izy ireo ho tsiambaratelo. Raha ny vaovao azo anefa, dia mbola hisy ny fivoriana manaraka atrehin’ ireto kandidà ireto hanapahan’izy ireo ny hetsika manaraka.
Ankoatra ireo fivorian’ny kandidà ireo, dia fantatra fa misy ny fikambanana izay maniry ny hiara-hiasa amin’ ireo firaisan’ny kandidà ireo. Io fikambanana io, izay efa nahazo fampitandremana tamin’ny filoham-panjakana, izay nanomezany baiko ny mpitandro ny filaminana amin’ny tokony hisian’ny fandraisana andraikitra. Na izany aza, mbola mipetraka ho fanontaniana ihany ny mety ho fiaraha- miasan’ny roa tonta, satria ny an’ilay fikambanana dia fanjakana malagasy no hajoro, ny an’ireo kandidà dia fanatsarana ny fanomanana ny fifidianana no tanjona. Izany hoe mitady vahaolana hanatsarana ny firenena ny rehetra, noho ny tsy fisian’ny fifampihainoana. Ny Ceni ihany anefa hatreto no namaly sy nitondra fanazavana mikasika ny fangatahan’ny firaisan’ireo kandidà 21, izay nilazan’ ny vaomiera manokana misahana ny fifidianana, fa tsy anjaran’izy ireo no manasazy ireo kandidà nandika ny fitsipika mifehy ny fifidianana. Raha toa izay no isan’ny fangatahana napetrak’ireo kandidà 21 tany ampiandohana.
Ny zava-misy ankehitriny dia vokatry ny tsy fandinihana lalina ny lalàna hapetraka eto amin’ ny firenena. Satria araka ny fitenin’ny Ntaolo hoe biby tsy manan-doha, tsy mandeha. Ankehitriny tokoa tsy misy ny filoha mpitarika, satria ny lalàna no namaritra fa raha mirotsaka ny filoham-pirenena amperin’asa, dia tsy maintsy mametra-pialana. Voalazan’ny lalàna indray ankilany fa misy ny mpisolo toerana, saingy anaram-boninahitra fotsiny ihany fa tsy afaka manao na inona na inona. Izany hoe amin’ izao fotoana izao, dia samy manao izay mahafalifaly ny fony sy tonga ao an-tsainy. Samy mivorivory mikaon-doha manapaka izay fantany fa mety, sy mitady vahaolana hitondrana ny firenena, ka ny hiafarany ny tsy fisian’ny mpitarika dia ny filatsahana any an-kady. Iza no homena tsiny amin’ny zava-misy ankehitriny, anjaran’ny rehetra no mamaly izany
Vehivavy iray 41 taona antsoina hoe Lalao Adeline Aimé, gadra nitsoaka teny amin’ny fonjan’i Manjakandriana no hifampitadiavan’ny mpitandro filaminana fatratra amin’izao fotoana izao. Namoahana taratasy fampikarohana, izay naparitaka eny amin’ny biraon’ny manam-pahefana mihitsy ity voafonja ...Tohiny